Homeसमाचारटिकटकमा झ’गडा गरेर चम्किएका जुम्ल्याहा दिदीबहिनीसँग रमाइलो कुराकानी (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 24, 2020 admin समाचार 9055
पछिल्लो समय टिक’टक बनाउँदै कलाकारिता क्षेत्रमा प्र’वेश गर्ने कलाकारको संख्या बाँ’क्लिदै छ । यही सुचीमा पर्छन्, झापा बुधबारेका जुम्ल्याहा दिदीब’हिनी स्मारिका र सामरिका ढकाल ।
टिकटकमा झ,गडा गरेको भिडियो रा’खेर चर्चा कमाएका यि दिदी बहिनीले दुइ महिनाको अव’धिमा एक दर्जन बढी म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसके । आफूलाई एक’दमै मनपर्ने अभि’नेता पल शाहसँग समेत स्क्रिन सेयर गर्न भ्या’इसके ।
तर, भन्छन्, ‘टिकटक बना’एजस्तो सजिलो रैनछ, अभिनय गर्न ।’ अब दुवैको चाह’ना रहेछ– फिल्मको हिरोइन बन्ने, अनि यही क्षेत्रमा करिअर बनाउने । कसरी तय भयो त यि दुइ जु’म्ल्याहा दिदीबहिनीको काठमाडौंसम्मको यात्रा ? टिकटकमा सधैँ झ’गडा गर्नु पछाडीको रहस्य के रहेछ त ? – ओएस नेपालबाट
बसन्त र समीक्षाको ‘माया देकै हो’ सार्वजनिक(भिडियो हेर्नुहोस)
February 15, 2022 admin समाचार 4167
December 20, 2020 admin समाचार 8636
August 27, 2021 admin समाचार 4262
हास्य कलाकार खड्ग बहादुर पुन (खबपु) दुर्घ`टनामा परेका छन् । बिहिबार साँझ ७ बजे उनी स्कुटी दुर्घ`टनामा परेका हुन् ।काठमाडौंको बाँनियाटारस्थित घरबाट बाहिर निस्कने क्रममा बिपरीत दिसा`बाट आएको ट्रकलाई साइट दिने क्रममा स्कुटी चिप्लिएर दु`र्घटनामा